Tontolo: Arahaba nahatratra ny Fetin’ny Reny! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2009 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, polski, Français, Ελληνικά, English
Felam-boninkazo tany Xela, Guatemala nalain’i Erik++ ao amin’ny Flickr
Raha misy ny zavatra iombonan’ny olombelona rehetra, dia ny hoe samy manana reny daholo isika rehetra. Ary amin’ny faritra maro eran-tany dia fahazàrana ny mankalaza ny renintsika amin’ilay andro miavaka iray: ny Fetin'ny Reny. Na dia miovaova aza ny daty ankalazana azy dia maro ireo firenena mankalaza izany androany, ny Alahady faharoa amin’ny volana Mey..
Manomboka any Denmark hatrany amin’ny Dominica, any Peru ka hatrany Pakistan, any Etazonia hatrany Oganda, mpitoraka blaogy maro tsy ankanavaka no miantso, mitsidika, na mahatsiaro ny reniny androany.
Toy izany ilay mpitoraka blaogy iray, Santa Cruz Barillas avy any amin’ny faritr'i Goatemala Huehuetenango, izay mitantara fankalazana ara-pomba ny Fetin’ny Reny:
Arahabaina nahatratra ny Fetin’ny Reny! Araka ny fomba fanao eto amin'ny tanàna mamintsika, ny faha-10n'ny volana May izao, manomboka amin'ny roa ora maraina, miara-mihira ‘sérénade’ ho an'ny reny rehetra eo an-toerana ireo vondron'olona sy fikambanana maro toy ny fiangonana, ny governemanta eo an-toerana ary vondron-tanora.
I Mahesh, avy any Bangalora, India, koa dia miblaogy momba ny andro androany. Manoratra momba ny Reny izy:
Any amin'ny kolontsaina tsirairay dia ny Reny foana no manana andraikitra be indrindra amin'ny fanabeazan-janaka. Nefa indraindray aho mahatsapa fa any an-tanan-dehibe indiana dia mihamanalavitra tsikelikely ny ray aman-dreniny ireo zanaka [izany hoe ireo olon-dehibe] 🙁 Havesatra be ny valin'izany atsy ho atsy. Tokony isan'andro no hisaorantsika ireo Renintsika (sy ireo Ray) fa tsy indray mandeha isan-taona fotsiny.
Ilay mpitoraka blaogy Amerikana “Plan A” dia renim-pianakaviana ihany koa, ary mankalaza olona roa manan-danja aminy manokana izy androany: ny an'ny Renin'ireo zanany roa natsangany any Oganda. Hoy ny mpitoraka blaogy:
Mba fantatrareo moa ~ Ny Fetin'ny Reny dia tsy hoe andro fialan-tsasatra ho an'ny Amerikana fotsiny fa ankalazaina manerana ny firenena maro maneran-tany mihitsy, isan'ireny Oganda. Androany, mahatsiaro manokana aho fa any misy vehivavy roa niteraka zazalahy kely roa tamin'ny taona 2006 sy 2007. Tsy misy anefa fomba ahafahan'izy ireo mahalàla izay mahazo ireo zanany izay efa ela be tokoa no nahitàny azy farany. Raha ny fahafatesan'ny reny no isan'ny antony voalohany mahatonga ny ankizy ho kamboty, dia mety ho azo inoana ihany koa fa efa ela izy ireo no maty. Nefa, na dia tsy ho fantatsika mandrakizay aza ny tantaran'izy ireo – androany kosa dia maneho fankasitrahana lalim-paka ho an'ireo vehivavy Afrikana roa niteraka ny zanako kely ireo aho.
Ny The Filipina Mom in Denmark dia nanamarika ny fankalazàna amin'ity hafatra fohy nefa tena mamy ity:
Satria tany taloha tany dia tovovavy daholo ireo reny rehetra, ary raha tsy misy ny zanatsika koa tsy reny isika! Manaova Fetin'ny Reny Finaritra (2009) !
Farany, Manfred Elfstrom, mamahana ny blaogy Labor is Not a Commodity, dia nanokana fotoana hampahatsiahivana antsika ny mba hanomezan-danja ny vehivavy rehetra, fa tsy ny renintsika tokana monja ihany:
Amin'izao fanatonan'ny Fetin'ny Reny sy ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Varotra tsy Mitanila izay tsy dia malaza loatra izao, dia tsara raha mba asiana resaka ny seha-pihariana iray manokana tena mampiasa tsy an-drariny vehivavy marobe. Ny indostria momba ny elektronika izany— tsy ny indostrian'ireo mpamorona ao Silicon Valley izay mipetraka tsara eo amin'ny toerany tokoa, fa ny seha-pihariana mamokatra ireny fitaovana fihainoana MP3 sy solosaina fitondra mandehandeha ampiasaintsika ireny. Raha maro amin'ny asa atao amin'ireny seha-pihariana ireny no mitaky fahaiza-manao manokana ary andraisana karama sahaza, dia maro koa no itakiana [amin'ireo vehivavy mpiasa] asa miitatra ora maro nefa ilàna fitandremana sy miverimberina, asa izay mitarika aretin-kozatra [cramp] any amin'ny lamosina sy mandreraka ny maso dieny mbola aty amin'ny fahatanorana sahady, nefa ny karama zara raha misy, na ambanin'izay voafetra ho farany ambany mihitsy aza.